सुन्दर र व्यावहारिक म्यानुअल ड्रिप कफी निर्माताहरू | बेजिया
सुन्दर र व्यावहारिक म्यानुअल ड्रिप कफी निर्माताहरू
मारिया vazquez | 06/04/2021 12:00 | पाक कला
कफी तयार गर्नु हामी मध्ये धेरैको लागि एउटा रीति रिवाज हो जसको साथमा मध्यरात वा मध्य दिउँसो रमाइलो र शान्तिको क्षण शुरु हुन्छ। त्यसो गर्न हामीसँग असंख्य विकल्पहरू छन्, हुन म्यानुअल ड्रिप कफी निर्माताहरू त्यो आज हामी एक नाजुक कफी तर धेरै स्वादको साथ राम्रो प्रस्ताव गर्दछौं।
सुन्दर, व्यावहारिक र ताररहित, यो म्यानुअल ड्रिप कफी निर्माताहरू हुन् जुन आज हामी बेजेसियामा प्रस्ताव गर्छौं। सबै फिल्टरले सुसज्जित छन् जसमा जमिन कफि राखिएको छ र जसमा तातो पानी म्यानुअल तरीकाले राखिएको छ तर कफिलाई बिभिन्न प्रकारको शेड सहित। मेलिट्टा, चेमेक्स वा हारियो, तपाईंले छनौट गर्नुभयो!
शताब्दीयौंदेखि, पानीको भाँडोमा ग्राउन्ड कफी तताएर कफी तयार गरिन्थ्यो। र यो यी कफी मेशिनहरू हुन् जसले निश्चित तरिकामा त्यो सार संरक्षण गर्दछ तर कफीको अन्तिम स्वाद सुधार गर्दछ। प्रयोग गर्न सजिलो, तिनीहरूसँग पनि छ अन्य प्रकारका कफी निर्माता भन्दा धेरै लाभहरू:
तिनीहरूले भान्छामा सानो ठाउँ लिन्छन्।
तिनीहरू हलुका र सार्न सजिलो छन्।
उनिहरु सुन्दर छन्। तिनीहरूमा उत्कृष्ट देखिन्छन् भान्छाको काउन्टरटप.
तिनीहरूलाई केबुल चाहिदैन।
यसको अपरेशन सरल छ
यसको सरलताले यसको स्थायित्व उच्च बनाउँछ।
ती सस्तो छन्
4 कफी कसरी बनाउने
के तपाईंलाई थाहा छ कि यो मेलिट्टाको संस्थापक हो जसले १ 1908 ०30 मा कफि फिल्टरि? गरेको थियो? पछि, s० को दशकमा मेलिट्टा बेन्ट्जले कन्क्लिन फिल्टरहरू प्रस्तुत गर्‍यो कफिको क्वालिटीमा सुधार आएको छ भने यसको निकासीको लागि ठूलो क्षेत्र उत्पादन गरेर। फिल्टर जुन हामी आज जान्दछौं र त्यो फर्मको चिनो बनेको छ।
तपाईं मेलिट्टा क्याटलगमा पाउनुहुनेछ प्लास्टिक, गिलास र पोर्सिलेन फिल्टर धारकहरू अभिनव ग्रूवहरूसँग जुन सन्तुलित कफि निकासी सुनिश्चित गर्दछ। थप रूपमा, यसका दुई उद्घाटनहरूले तपाईंलाई कफी पिउनको रमाईलो साझा गर्न अनुमति दिनेछ, किनकि तपाईं एकै समयमा दुई जना तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। र यसले तपाईलाई १€ डलर भन्दा बढी खर्च गर्नु पर्दैन।
मेलिट्टा डालो ओभर गिलास क्याराफेको साथ संयोजनमा पोर्टफिल्टरहरूले तपाईंलाई आज अनुमति दिन जारी राख्छन् एक सरल र सुरुचिपूर्ण तरिकामा कफ बनाउनुहोस् मान्छे को एक राम्रो संख्या को लागी। क्याराफे बोरोसिलिकेट गिलासबाट बनेको छ र तातो हुने जोखिमबिना तातो वा चिसो तरल पदार्थको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो माइक्रोवेभको लागि उपयुक्त छ र यसको हटाउन योग्य ढक्कनको लागि धन्यवाद यो सजिलै डिशवॉशरको धुन्छ।
आइकनिक चेमेक्स ग्लास जुग १ 1941 XNUMX१ मा जर्मन रसायनविद् पीटर स्लम्बोहमले आविष्कार गरेका थिए। यसको सफा र सरल डिजाइन कुनै पनि काउन्टरटपको शीर्षमा यसलाई राम्रो देखिन्छ। काठको ह्याण्डलको मोडल विशेष गरी आकर्षक छ, साथै डिजाइनमा न्यानोपन प्रदान गर्दै, यसले तातो गिलास समात्दा तपाईंलाई जलाउनबाट रोक्दछ।
ह्यान्डहेल्ड कफी निर्माताहरू विभिन्न आकारमा तीन देखि तेह्र कप सम्म पेय पदार्थहरू उपलब्ध छन्। र यसको फाइबर फिल्टरको डिजाईन विशेष छ, प्रतिस्पर्धा भन्दा गाढा कटु तत्व, तेल र अन्न आफ्नो कप बाहिर राख्न।
हारियो १ 1921 २१ मा टोकियोमा स्थापना भएको थियो र मूलतः रासायनिक प्रयोगशालाहरूको लागि गिलास उत्पादनहरू उत्पादन गर्‍यो। तपाईंको सबैभन्दा लोकप्रिय V60 उपकरण, यो पोर्टफिल्टर्स सुधार गर्न विकसित भएको थियो जुन त्यस समयमा अवस्थित थियो। º०º को कोणको साथ, पानी पीसको बिन्दुतिर बग्छ, सम्पर्क समयलाई लामो पार्दै।
यो क्याराफे र शंकु सेट फिल्टर कफी बनाउनको लागि यो उपयुक्त छ कि, किफायती मूल्यमा (€ २)), तपाईसँग घरमा कम्तिमा फिल्टर कफी बनाउनको लागि चाहिने चीज हुन सक्छ। यो प्राप्त गर्न, तपाईले फर्मको निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्छ।
तपाईले रोज्नु भएको म्यानुअल ड्रिप कफी निर्माता, कफी तयार गर्ने तरिका धेरै त्यस्तै हुनेछ राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न आवश्यक कफी र पानीको अनुपातमा मात्र फरक हुन्छ। तातो पानीले फिल्टरलाई नुन पार्नु, मध्यम दानाको ग्राउन्ड कफीको तौल गरी र फिल्टरमा समान रूपमा वितरण गर्नु निम्नानुसार अनुसरण गर्ने पहिलो चरणहरू हुन्।
त्यसोभए तपाईंले भर्खरै पानी तात्नुपर्दछ र यसलाई गोसेन्क जगमा राख्नुपर्दछ। किन? किनभने यसको साथ तपाईलाई तातो पानी थप्न सजिलो हुनेछ गोलाकार गति मा कफी माथि बीचबाट बाहिर। पानीको तापक्रम पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ; यो and ० र 90 degrees डिग्री बीचको हुनुपर्छ। यदि तपाईंसँग थर्मामिटर छैन भने, यो तपाईं उमाल्दा लगभग seconds० सेकेन्डमा बढ्नको लागि पर्याप्त हुनेछ।
यूट्यूबमा असंख्य भिडियोहरू छन् यी म्यानुअल ड्रिप कफी निर्माताहरू प्रयोग गर्नका लागि व्यावहारिक सल्लाहहरूको साथ, तिनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » पाक कला » सुन्दर र व्यावहारिक म्यानुअल ड्रिप कफी निर्माताहरू
चाभेको साथ टोफु र फूलगोभी करी